Hanti-dhowrka Qaranka : Isla xisaabtanku wuxuu gaarayaa xafiis-yada madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha dalka | Sagal Radio Services
Maxamed Maxamuud Cali Afgooye hanti-dhowraha Qaranka oo maanta kulan la yeeshay guddiga maaliyada Baarlamaanka ayaa tafaasiil dheeraad ah ka siiyay tallaabooyinkii ugu danbeeyay ee uu xafiisku qaaday.
“Xafiiskeyga howlo muhiim ah ayuu wadaa, sida aad la socotaan waxa hada xiran oo baaris ay ku socotaa masuuliyiin ka tirsan hay’addaha Dowladda oo arrimo Musu maasuq lagu soo eedeeyay, kuwa kalena wa ku daba jirnaa”. ayuu yiri Hanta dhowraha Qaranka.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda ee Golaha Shacabka Maxamed Aadan Macalin oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee uu wado Hanti dhowrha, sidoo kale waxa ay ka codsadeen inuu sii laba jibaaro howlaha la xisaabtanka.
Kulankan ayaa qeyb ka ah kullamada Guddiga uu la yeelanayo hay’addaha iyo Guddiyada Madaxa banaan ee shaqo wadaaga ay yihiin.